Gudaha jeebka ka hor
The Hordhac of Shoogga Sub Drilling
qodista ayaa si lama filaan ah sub horumarsan inay ka jaraan string layliga ka deflections axial abuuray yara iyada oo loo marayo qodista ka dibna difaaco qayb ka shubtaa xad-dhaaf ah on marayo qodista. Qalab nuugaya load lama filaan ah ku dhawaad ​​string layliga iyo xoogaa layliga. Waxaa ka mid ah h a ...
Haydarooliga jaraya-qalabka ugu guulaystay suuqa
Sida la og yahay in dhan, magaabay wiil farsamo gudaha waxaa inta badan loo isticmaalaa meesha la qalay oo ka mid ah qeybo ka mid kor ku xusan biibiile downhole ku xayiran, sida string technology-soo-saarka, column layliga iyo wixii la mid ah. Sidoo kale, haddii qaatay in goynta waqtigii bacda gogosha sanduuqa battariga ee axdi qarameedka of ceelka dhismaha, iyadoo ...
Isbadalka u fiican oo kayd Tababbarrada
Mid ka mid ah ujeedada ugu caadiga ah ee tababbarrada ku jirtay metalworking, najaaro, horumarinta iyo sidoo kale hawlaha DIY. Waxaad ka heli doontaa oo dhoollatus ka sameeyey gaar ahaan loogu isticmaalo daawada, sahaminta bannaan iyo xataa macdanta diamond. Waxaad ka heli doontaa oo dhoollatus ballaaran oo dhoollatus yar iyo sidoo kale a ficil infinites ...
Oil World Baahida
Tilmaamaha Baahida Oil World (13 November 2015) * Fadlan la soco in Sahlan yihiin laga soo Report Market Oil ugu dambeeyey, kaas oo la sii daayay si buuxda u macaamiishu keliya - sida ku qoran jadwalka this bil kasta. macaamiishu Non hesho lacag la'aan ah si ay ugu muhiimsan ugu dambeeyay ee jadwalka this helaan, si kastaba ha ahaatee ...
qalabka daloolin Energy
Waxa ay inta badan ku shaqeeya by gacanta ama xoogga korontada. Waxaa suurto gal ah in sidoo kale shaqaaleeyaan mashiinka sida kaashawiito ah. Aad leedahay si aad kaliya u xaliyo tip a kaashawiito mishiinka loo isticmaalo sida kaashawiito ah. mashiinada qodista waa la heli karo in noocyada kala duwan ku saleysan oo ay u baahan yihiin. Noocyada kala duwan ee ...
Wareegga dhiigga dambe (RC) Drilling
wareegga dambe (RC) qodista isticmaalaa biibiile daloolin dual-deyran ku ah (ul) la yara daloolin adag in ay soo saaraan god formation iyo koriyo chips dhagax weyn (gooyn) si ay dusha sare ee falanqayn ku xiga. farsamo qodista waa qalab a pneumatic reciprocating (dubbe) wadista tungsten-steel a d ...
reamers isaguu ka shaqeeyaan hawlaha caajis iyio saliida & gaaska. Shaqada ugu weyn ee reamers rullaluistemadka jaray qaababka dhulka ku sii ballaadhi ceel si le'eg la jecel yahay inta lagu jiro hawlgalka iyo sidoo qodista, kaas oo noqon kara size asalka ah ee yara layliga kiiska halkaas oo yara layliga w ...
Motors Mud Downhole
Motors Mud Downhole Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo matoorrada downhole ku shaqeeya by socodka dhoobo, 1) marawaxadaha The, kaas oo asal ahaan waa bamka culus ama axial iyo 2) motor dhoobo barakac positive (PDM). Mabaadiida hawlgalka waxaa lagu muujiyey in Jaantuska iyo design ee qalab ay yihiin gebi ahaanba ka duwan. ...
22 #, South Changling Road, Degmada Guanshanhu, Childcare, 550081 Shiinaha.
Reverse Circulation Junk Basket, Nixin Tool Drilling Sub, Dhalooyinka Kalluumaysiga, Tools Kalluumaysiga, Two-Way Shock Sub, Go'ay Tool Kalluumaysiga Sub In Drilling,